Ikamelo lokulala eli-1 i-West End flat, i-Aberdeen City Centre - I-Airbnb
Ikamelo lokulala eli-1 i-West End flat, i-Aberdeen City Centre
258 okushiwo abanye
Ifulethi elilodwa elinekamelo lokulala eliphakathi ‘Nesiko Lekhofi‘ laseNtshonalanga le-Aberdeen futhi liphakathi nebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Aberdeen ‘s Union Street.
Iyisicaba inekamelo elilodwa elilala abantu ababili elinombhede olala abantu ababili.
Igumbi lokuphumula linefenisha usofa wesikhumba ontofontofo, itafula lokudlela, i-TV kanye nesistimu yomsindo.
Ikhishi lifakwe ngokugcwele i-hob, uhhavini, i-microwave, umshini wokuwasha/i-umble dryer nomshini wokuwasha izitsha.
Ikamelo le-shower linokuhamba ngezinyawo endaweni emanzi
iphemithi yokupaka yamahhala iyatholakala endaweni yokupaka esemgwaqweni.
Ifulethi (ifulethi) lisanda kulungiswa ngezinga eliphakeme, lesimanje elinamakamelo akhanyayo, anomoya futhi litholakala endaweni yokuhlala enhle, enamathilomu endawo, amathilomu, nezindawo zokudlela, kodwa ebangeni elilula lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha.
I-Flat yakha ingxenye eyodwa yendawo yaphansi yentuthuko yokuhlala ethulile, futhi ifudumele, ithokomele futhi ihlanzeke ingenabala nge-wi-fi esheshayo, i-TV, isistimu yomsindo futhi ifudumele ngokuphelele.
Kukhona ukuma kwebhasi maqondana nefulethi, ama-busses agijima njalo emaminithini angu-30 enkabeni yeDolobha lase-Aberdeen, kanye nokuvama okufanayo ohambweni lokubuya.
Umkhawulo wokuhlala abantu abadala abangu-2 (noma ingane), ukungabhemi ngokuqinile futhi ngokunethezeka komakhelwane bethu, amaphathi asendlini awavunyelwe.
Iyisicaba itholakala ngokuphelele ukufinyelela izinto zokuhamba zomphakathi futhi ngaphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo kwamasevisi endawo kuhlanganise nama-bar, izindawo zokudlela, izitolo zochwepheshe bendawo kanye nezitolo ezilula kanye nezitolo eziningi zekhofi. I-Union Street ikude ngemizuzu engu-10 - 15 (1km) nayo yonke indawo yayo yokuthengisa nokuzijabulisa.
Ungasishayela ucingo, usithumelele i-imeyili noma usithumele umyalezo uma unezinkinga futhi sivame ukubuyela kuwe ngokushesha.